Search...	Home About us Contact us Home	Maxaa Kajira in Semayawi (Blue) Party Jigjiga Wakiilo U Joogaan?
Published on Thursday, 06 June 2013 11:57	Xogta Shacabka (Jigjiga) Xisbiga Semayawi (Blue) Party ayaa lagu soo waramayaa inuu xubno ka samaystay magaalada Jigjiga, isla mar ahaantaana ay qorshaynayaan inay dibad bax ballaadhan ka sameeyaan todobaadyada fooda inagu soo haya. Ardayda jaamacada Jigjiga iyo aqoonyahano dagaanka Soomaalida u dhashay oo hormuud u ah ayaa lagu soo waramayaa inay Semayawi Party ka hirgaliyeen Kililka 5aad.
Ilo lagu kalsoonyahay oo aad ugu dhaw xubnaha hawshan bud-dhigayaasha u ah ayaa Xogta Shacabka u sheegay in arrintan abaabulkeeda lagu guda jiray mudo dhawr bilood ah iyadoo la huwinayay magac hayadeed iyo Consultansiyo. Dadka xubnaha muhiimka ah loo qortay oo isugu jira shaqaale dawladeed iyo ganacsato garab-rarato ah ayaa intooda badan laga shaqaaleeyay hayadahaas lagu raad-gadanayo.
Hayadahaas ayaa waxaa madax ka ah xubno iyagu xilal waawayn ka soo qabtay dagaanka Soomaalida iyo waliba dawlada Federaalka, balse markii danbe la eryay. Baadhitaan ay Xogta Shacabku samaysey ayaan ku soo ogaannay inay masuuliyiintaasi kamid yihiiin M/weynihii hore ee DDS, Daud Maxamed Cali, Wasiirkii Hore ee Beeraha Ethiopia, Bashiir C/laahi iyo Maxamed Adan Dalab oo isagu ah wakiilka Semayawi Party ee Jigjiga.
Dibad-baxa ay Semayawi Party ka qorshaynayaan Jigjiga ayaa qayb ka ah dadaal ay wadankoo dhan ku tala jiraan inay banaan baxyo kaga sameeyaan, iyagoo kii ugu horeeyay Addis Ababa ku qabtay todobaadkii hore, isuguna keenay dad aad u tiro badan. Xubnaha Semayawi Party ayaa calaamad ka dhigtay midabka buluuga ah iyagoo inta badan sita shay midabkiisu buluug yahay sida gaadhi, telephone, ipad iwm.
Lama oga inay xukuumada Kililka waydiisteen fasax ay ku banaan baxaan iyo in kale, hase ahaatee xisbiga Semayawi (Blue) Party ayaa ah xisbi ka sharciyaysan wadanka Ethiopia. wadamada ree Galbeedka oo iyagu deeqda ugu badan siiya wadanka Ethiopia ayaa soo dhaweeyay inay Dawlada Ethiopia ogolaato dibad-baxyada sida nabad galyada ah u dhaca dadkana aan la cabudhinin.
Wasaarada Dakhliga oo Wasiir Cusub Yeelatay
Published on Thursday, 06 June 2013 03:22	Xogta Shacabka (Addis Ababa) R/wasaaraha Ethiopia Hailemariam Dhesalany ayaa wasiirka Dkhliga ee dalka u magacaabay Ato, Bakar Shaale oo ahaa duqa magaalada Naazret. Xilka loo magacaabay Bakar Shaale, ayuu hayn jiray Malaaku Fanta oo dhawaan jeelka loo taxaabay isaga iyo ku xigeenkiisiiba.
Jariirada Reporter ee Addis Ababa ka soo baxda ayaa qortay in todobaadkii hore Bakar loo magacaabay wasiirka Dkhliga, isagoo sida Reporter sheegayso horay wasiiru dawle uga soo ahaa wasaarada Dakhliga ee dawlda dhexe.
Wali cid looma magacaabin booskii u baneeyay wasiir ku xigeenki Dakhliga Gabrawaxid oo isna kamid ahaa saraakiishii loo xidhay musuq maasuqa.
Cabdi Iley oo Dhagaxbuur Maanta Gaadhay
Published on Wednesday, 05 June 2013 14:52	Xogta Shacabka (Dhagaxbur) Magaalada Dhagaxbuur waxaa saaka gaadhay Madaxweynaha Kililka, Cabdi Iley oo sida naloo sheegay halkaasi uga hor tagay wafdigii taariikh uruurinta ku jiray ee Godey daraad tagay oo galabta ku soo beegan Dhagaxbuur. Cabdi Iley ayay wakhti hore ugu danbaysey magaalada Dhagaxbuur.
Dad aan kala xidhiidhnay magaalada Dhagaxbuur ayaa inoo sheegay in maanta duhurkii uu Cabdi Iley socod ku marayay dariiqyada magaalada, isagoo u istaagayay dadka cidii ay is gartaan, isla mar ahaantaana salaamayey.
Cabdi Iley ayay sida naloogu waramay ilaalinayeen askar aad u badan oo ku socda gawaadhida qabaalka ah. Barito ayaa la filayaa in wafdiga taariikh uruuriska gobolka u yimid ay gaadhaan xarunta kililka ee Jigjiga.
Thomas Friedman "Can God Save Ethiopia?"
Published on Tuesday, 04 June 2013 17:01	Xogta Shacabka (Addis Ababa) Maqaal gaaban hasa ahaatee ay ku dhan yihiin tusaalayn farabadan ayuu qoraaga caanka ka ah Mareykanka Tom Friedman ku soo qoray wargayska New York Times oo kamid ah waregaysyada loogu akhriska badanyahay caalamka. Wuxuu ku bilaabay maqaalka; Wararkii shalay laga sheegay Itobiya waxay ahaayeen qaar aan horey loo maqal, waxayna dhalisay in la’isweydiiyo godka dhamaadkiisa ma muuqdaa. Maqqaalka oo cinwaankiisu yahay (Can god saveEthiopia) ayuu qoraaga isagoo sii wata hadalkisia yidhi; Waxaan marnaba suurtagal ahayn in arimaha ka socda dalkaa aanay wax ka badalin sooyaalkii Itobiya. Arinta muhiimka ahse waxaa weeye in aan shiishka saarno shacabka Itobiya siday iyagu u arkaan arimahan socda.
Halkan Ka Akhri: Can God Save Ethiopia?
M/weynaha Puntland Faroole & M/weynaha Kenya oo Kulan Muhiim Ah Yeeshay
Published on Monday, 03 June 2013 18:28	Xogta Shacabka (Nairobi) Madaxwaynaha dowlad-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo maalmihii ugu danbeeyay kulamao kala duwan la lahaa diblumaasiyiin iyo saraakiil sar sare oo ku sugan magalada Nayroobi,ayaa maanta sidoo kale Aqalka State House kula kulmay madaxwaynaha Kenya Uhuru Kenyata. Labada hogaamiye ayaa si qoto dheer uga hadlay xaalada Somalia iyo doorkii ay dowlada Kenya ka ciyaartay sidii ammaanka looga shaqayn lahaa,isla markasna dalka looga sifayn lahaa kooxda Al shabab.
Madaxwaynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamad Faroole oo kulankaasi hadal kasoo jeediyay ayaa marka hore dowlada Kenya ku ammaanay kaalinta wanaagsan ee ay ka qaadatay dib u dhiska dalka, wuxuna sidoo kale Faroole Uhuru Kenyata uga warmay Dastuurka dalka iyo dhismaha mamulka Jubbaland. Cabdiraxmaan Faroole ayaa Madaxwaynaha Kenya uga waramay horumarka kala duwan iyo nidaamka axsaabta badan ee Puntland ka hirgalay,taasoo ku tilmaamay inay qayb ka tahay guulaha ugu waa wayn ee xukumadiisa ay gaartay.
Madaxwaynaha Kenya ayaa ku ammaanay dowlada Puntland habka wanaagsan oo ay u raadinayso midnimada Soomaliya,wuxuna ku tilmaamay inay tahay arin lagu amaanaya xukumada Cabdiraxmaan Faroole,wuxuna sidoo kale Uhuru uu ka hadlay xoojinta nidaamka fedaraalka ee ay ku dhisan tahay dowlada dhexe ee dalka, wuxu kaloo sheegay inay lama huraan tahay ku dhaqanka Dastuurkii ay saxiixeen lixdii saxiixayasha tubta nabada.
Madaxwaynaha Kenya ayaa sidoo kale ka waramay howlaha ay dowladiisu ka wado gudaha Somalia, wuxuna ku sheegay inay tahay sidii looga shaqayn lahaa xal waarana loogu raadin lahaa ammaanka dalka.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole ayaa sidoo kale la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibada ee Kenya Aamina.
Wasiirkii Cadaalada Ethiopia & 10 Xeer-Ilaaliye oo Dacwadi Ku Socoto
Published on Monday, 03 June 2013 17:36	Xogta Shacabka (Addis Ababa) Wasiirkii Cadaalada Ethiopia ee dhawaanta shaqada laga eryay Birhane Haylu iyo ugu yaraan toban kamid ah xeer ilaaliyaasha Federaalka, ayuu ku socdaa baadhitaan ku saabsan dad looga shakiyay musuq, argagixsnimo, iyo dilal oo ay dacwadooda is-hor taageen. Jariirada lagu magacaabo Adhmas ayaa qortay in ay Boolisku dukumintiyo ka qaateen xafiiskii Wasiirka la eryay iyo xeer ilaaliyaasha, lagana yaabo inay jeelka u taxaabaan.
Awooda xeer ilaaliyaasha ee dhanka dacwadaha ayaa ah inay hakin karaan dacwada hadii aan cadaymo ku filan loo haynin, balse waxaa lagu eedaynayaa xeer ilaaliyaashan inay joojiyeen dacwado musuq iyo dilal ah loona hayay cadaymo ku filan sida ay boolisku ku andacoonayaan. Dacwadahaasi ayaa la tuhunsayahay inay kamid yihiin kuwii dhawaan loo xidh xidhay masuuliyiintii Wasaarada Dakhliga, ganacsato iyo dilaaliin.
Xisbiga EPRDF ee Ethiopia ka taliya, ayaa kalfadhigoodii u danbeeyay hoosta ka xariiqay dhibaatooyinka ugu waawayn ee dalka ka jira inay ka muuqato madaxda sare ee dalka. Sannadkan aynu ku jirno waxaa musuq-maasuq lagu eedeeyay xilkiina laga qaaday sadex wasiir, halka Wasiirkii Adeega Bulshada, Junedi Sado, dibada u baxsaday.
C/Sonkor; Siyaasiga Loogu Jecelyahay Kililka 5aad
Published on Monday, 03 June 2013 16:45	Xogta Shacabka (Godey) Gudoomiyaha gobolka Shabeelle Cabdi Xuseen (Sonkor) ayaa ah siyaasiga ugu qunyar socodsan xubnaha guddiga fulinta xisbiga haya talada dagaanka Soomaalida ee SPDP. Cabdi-Sonkor ayaa leh tayo iyo tilmaamo badan oo aysan la wadaagin inta badan siyaasiyiinta Kililka, kana dhigtay siyaasiga loogu jecelyahay.
Markii Cabdi-sonkor noqday Gudoomiyaha gobolka Shabeele sanadkii 2010, waxaa gobolkaasi ka taagnaa is-faham la’aan ka dhex jirtay maamulka gobolka iyo shacabka Godey, taasi oo wakhtigaasi loo baahnaa masuul wax ka qabta. Cabdi Iley oo la filayay inuu Cabdi-sonkor u watay Hogaanka Nabadgalyada ayaa u magacaabay gudoomiyaha gobolka, Cabdi-sonkorna markiiba wuxuu meesha ka saaray mad-madawgii.
Cabdi-Sonkor ayaa intuu halkaasi ku sugnaa wax badan ka qabtay mashaariicdii jiitamayey ee dhanka horumarka, isagoo noqday gudoomiyaha kaliya ee aysan dib-u curashadi meel kale u badalin. Sidoo kale ayuu Cabdi-sonkor dib uga mid noqday guddiga fulinta SPDP oo laga eryay ugu yaraan 8 xubnood.
Dhanka kale, wuxuu Cabdi-Sonkor horaantii sannadkan 2013 kamid ahaa wafdigii kililka ee booqday wadanka Kenya, isagoo wacyi-galin badan ku soo sameeyay Jaaliyada Dagaanka Soomaalida, isla mar ahaantaana ganacsato badan ku qanciyay inay yimaadaan wadanka, maal-gashina ku sameeyaan.
Cabdi-Sonkor ayaa ah shaqsi aan balwad lahayn oo inta badan ku mashquula shaqadiisa, aadna u af-gaaban. Masuuliyiinta iyo dadka qurba-joogta ah ee booqda gobolka Shabeele ayaa Cabdi-sonkor ku amaana soo dhawayn iyo marti-galyo heer sare ah. Tilmaamahaas iyo kuwo kaleba waxay Cabdi Xuseen (Cabdi-Sonkor) ka dhigeen siyaasiga loogu jecelyahay Dagaanka Soomaalida.
Maxaa Laga Raadinayaa KALI?
Published on Sunday, 02 June 2013 17:30	Xogta Shacabka (Godey) Magaalada Godey waxaa maanta gaadhay masuuliyiin ka tirsan maamulka kililka oo u hor kacayo Af-hayeenkaa Baarlamaanka Kililka, kuwaasi oo halkaasi u tagay inay soo dhaweeyaan marti sida naloo sheegay kor u dhaafaysa 200 baritona Goday ku soo aadan.
Martidan oonu horay u soo qornay inay booqanayaan gobollo dhawr ah ayaa maanta naloo sheegay inay baadhitaan ku samaynayaan taariikhda siduu gobolka Ogadeniya uga mid noqday wadanka Ethiopia. Mid kamid ah akhristayaasha Xogta Shacabka oo arkay jadwalka meelaha ay marayaan kooxdani ayaa nasoo gaadhsiiyay inay kamid tahay halka lagu magacaabo KALI oo ah bartii uu Ingiriisku kula shiray odayaasha Ogaadeen,1954 ayna Ethiopia ku raaceen.
Kooxdani ayaa sida ay dad kala duwani noo sheegeen ka socota Baarlamaanka qoomiyadaha Ethiopia, waxaana hogaaminaya Af-hayeenka Golaha Federation-ka Ato Kasa Tekle. Lama garanayo sababta wakhti xaadirkan keentay booqashada goobaha taariikhiga ah iyo ergadan balaadhan ee booqanaysa dagaanka.
Wasiir Ku Xigeenkii Beeraha DDS oo Sweden u Baxsaday
Published on Sunday, 02 June 2013 16:50	Xogta Shacabka (Stockholm) Wasiir Ku Xigeenkii Beeraha ee Kililka 5aad C/Qaadir Muxumad Faarax ayaa la xaqiijinayaa inuu dibada u baxsaday. C/qaadir oo labadii todobaad ee u danbaysayba ka maqnaa Jigjiga, dadkuna isla dhex marayeen inuu dalka ka baxay, ayay dad la rumaysan karo na soo gaadhsiiyeen inuu ku suganyahay wadanka Sweden.
Baxsiga C/Qaadir ayaa lagu soo waramayaa inay ka danbaysey kadib markii masuuliyiinta Kililku ku eedeeyeen inuu ka danbeeyay xiisadii todobaadyadii la soo dhaafay hadhaysey magaalada Jigjiga ee odayaashii beesha Jidwaaq ee Addis Ababa u dacwo tagay. Ilo lagu kalsoonyahay oo Jigjiga ku sugan ayaa Xogta Shacabka u sheegay in Madaxa Xarunta Dhexe ee Xisbiga Axmad Maxamed Shukri uu telefoon kula xidhiidhay C/Qaadir oo shaqo u joogay Addis Ababa kuna amray inuu si dag dag ah Jigjiga ku soo galo, taasi oo C/Qaadir ka shakiyay sababta loogu yeedhay, kadibna uu telefonadii iska damiyay, gaadhigiina u diray Jigjiga.
Masuul sare oo maamulka Kililka ka tirsan si kalsooni ahna Xogta Shacabka ugu waramay ayaa noo sheegay, inay maamulka Kililku aad uga xumaadeen baxsiga C/Qaadir, ilaa haatanna ay qarinayaan inuu dalka ka baxay. C/qaadir ayaa Addis Ababa ka baxay 25-kii May, haatana jooga Sweden. Lama hubo inuu qoxootinimo isku dhiibay iyo in kale.
Dhanka kale wararka Jigjiga la isla dhex marayo ayaa sheegaya in ooda laga qaaday duqaydii beesha Jidwaaq ee dhawaanta la xidh xidhay. Wasiir Ku Xigeenka Enterprise-ka Naqshadaynta Guuleed Aw-Cali ayaa la sheegayaa inuu kaalin laxaad leh ka ciyaaray dajinta xiisada ka aloosantay gobolka Faafan, isagoo odayaashii Addis Ababa u hayaamayna dib ugu soo celiyay Jigjiga.
Mid kamid ah ku-xeel dheerayaasha siyaasada Kililka, oonu baxsiga Wasiir Ku Xigeenka Beeraha DDS wax ka waydiinay ayaa tilmaamaya in kacdoonka beesha Jidwaaq aanu u jirin sidii laga dhigayay, lana buun buuniyay, C/Qaadirna uusan wax lug ah ku lahayn, balse ay lal u tuureen siyaasiyiin isla beesha Jidwaq ka mid ah oo ay xurgufi ka dhexaysey.
C/Qaadir Muxumad Faarax oo ka soo jeeda dagmada Qabri-bayax, ayaa kamid ah aqoonyahamiinta Kililka u dhalatay ee fursada u helay waxbarasho dibadeed, wuxuuna laba sanadood ka hor un kasoo laabtay wadanka Japan oo u waxbarasho dawladu ka bixisay ku soo ebyay.
Ninkii Barbara Laga Soo Qabtay Xagee La Geeyay?
Published on Sunday, 02 June 2013 06:30	Xogta Shacabka (Hargaysa) Saxaafada taageerta Jabhada ONLF, waxay maalmihii ina dhaafay qortay muwaadin u dhashay Ogaadeenya oo ay maamulka Somaliland ka soo qabteen Berbera una gacan-galiyeen daawlada Ethiopia. Ninka la soo qabtay oo lagu magacaabo C/raxmaan Xasan C/llaahi ayay Xogta Shacabku soo ogaatay in la sii daayay, kadib markii la ogaaday inuusan ahayn kii la raadinayey.
Baadhitaan an samaynay ayaan ku soo ogaannay in ay ninkaasi soo qabteen labada nine e lagu kala magacaabo Kornayl C/kariin iyo Ciise Muuse oo u dhashay Somaliland, hasa yeeshee ka tirsan Liyu Booliska Kililka 5aad. Xogo an meelo kala duwan ka helnay sida ay sheegayaan C/raxman Xasan C/llaahi-ga ay dawlada Ethiopia raadinaysey ayaa ONLF wakiil uga ahaa Geeska Afrika, gaar ahaan Puntland, Somaliland, Jabuuti iyo waliba Yeman. Ninka la soo qabtay ayaa lagala soo dagay diyaarad Transit ku ah magaalda Barbara, wuxuuna ka soo raacay Gaalkacayo oo ah halka ay xogtiisa ka heleen ninmanka soo qabtay.
Wararkii u horeeyay een ka helnay qabashada ninkaasi ayaa ku waramaya in lagu xidhay xero ciidan oo ku taalla Balli-Gubadle, halkaasina ay fadhiisin u tahay ciidan uu madax ka yahay kornayl C/kariin. Hase ahaatee warar Jigjiga naga soo gaadhay ayaa sheegaya in ninka la soo qabtay aanu ahayn wakiilkii Jabhada ONLF ee u noqday nin shacab ah oo ay isu magac-egyihiin.
Ilo lagu kalsoonyahay oon Jigjiga kala xidhiidhnay ayaa noo xaqiijiyay inaan ninkaasi Jigjiga la keenin, lana sii daayay, maadaama aanu ahayn ruuxii la moodayay. inkastoo ay wararka qaar sheegayaan in an wali la sii daynin.
Dawlada Kenya oo Axmad Modoobe Aqoonsatay
Published on Sunday, 02 June 2013 00:15	Xogta Shacabka (Nairobi) Dawladda dalka Kenya, ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaadday inay Madaxweynaha Maamul-goboleedka Jubaland u aqoonsan tahay Axmed Maxamed Islaan (Axmed-Madoobe), iyadoo Khilaaf weyni ka taagan yahay cidda ah Madaxweynaha Sharciga ah ee Maamulkaas, ka dib markii Magaalada Kismaayo toddobaadyadii la soo dhaafay lagaga dhawaaqay illaa saddex Madaxweyne oo mid weliba sheeganayo inuu yahay ka sharciga ah.
Jeneraalka ugu sarreeya Ciidammada dowladda Kenya oo lagu Magacaabo Julius Karangi, ayaa shaaca ka qaaday in Kenya ay u aqoonsan tahay Madaxwaynaha Maamul-goboleedka Jubaland Axmed-madoobe oo dhawaan shir ka socday gudaha Magaalada Kismaayo loogu doortay in uu yahay Madaxwaynaha maamul-goboleedka Jubaland.
Taliyaha ugu sarreeya Ciidamada Millateriga dalka Kenya ayaa ku dooday in aanay Kenya wax lug ah ku lahayn doorashadii Axmed-Madoobe, Hase-yeeshee, ay doorashadiisa taageersan yihiin, isla markaana aqoonsanyihiin dawlad ahaan in uu yahay Madaxwaynaha Jubaland.
“Kenya kuma lug lahayn doorashada Axmed-Madoobe, laakiin waa mid sax ah oo aannu aqoonsannahay, isla markaana aannu ula shaqayn doonno si wanaagsan annagoo og in uu yahay Madaxwaynaha sharciga ah ee maamul-goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland.” Sidaa ayuu yidhi Taliyaha Ciidanka Millateriga Kenya Julius Karangi.
Waa markii ugu horraysay ee Masuul sare oo ka tirsan dawladda Kenya uu ku dhawaaqo in Xukuumadda Nairobi ay u aqoonsantahay Axmed Madoobe inuu yahay Madaxweynaha Sharciga ah ee Maamul-goboleedka Jubaland.
Wafdigii DF Somalia ee Kismayo Tagay oo Muqdisho Ku Soo Laabtay
Published on Saturday, 01 June 2013 19:04	Xogta Shacabka (Muqdisho) Wafdi ka socda Dawlada Federaalka Soomaaliya uuna hogaaminayey Wasirka Warfaafinta, C/laahi Cilmoge, oo safar ku joogay Kismaayo ayaa shalay galab dib ugu soo laabtay Muqdisho. Sidoo kale ayay wafdigan kamid ahaayeen qaar ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya.
Intii ay wafdigu ku sugnaayeen magaalada Kismaayo, ayaa lagu soo waramayaa inay ku xaninbnaayeen garoonka diyaaradaha mudo afar maalmood ah inkastoo markii danbe loo ogolaaday inay galaan gudaha magaalada.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya C/laahi Cilmoge oo saxaafada la hadlay markuu Muqdisho soo gaadhay, ayaa sheegay inay wada hadalo la yeesheen dhinacyada kala duwan ee Kismaayo ku sugan, isla mar ahaantaana ay natiijo fiican ka gaadheen. Cilmoge ayaa sheegay inu faah faahin dheeraad ah bixin doono kadib marka uu xukuumada u waramo.
Cabdi Iley oo Godey Safar Ugu Kacay
Published on Friday, 31 May 2013 17:31	Xogta Shacabka (Jigjiga) War goor dhawayd na soo gaadhay ayaa sheegaya in u Madaxweynaha Kililka Cabdi Iley u anba baxay safar aan la shaacin gobolka Goday, oo laba maalmood kadib ay booqanayaan wafdi ballaadhan oo ka socda dawlada Federaalka. Wafdigan Goday booqanaya ayaa isugu jira masuuliyiin iyo kooxo dhanka fanka ah oo booqasho dhawr maalmood ah ku soo maraya gobollada Goday, Qoraxay, iyo Jarar.
Cabdi Iley ayaa magaalada Jigjiga kaga anba baxay gaadhi, sida uu noo sheegay mid kamid ah dadka xogtan na soo gaadhsiiyay oo noo sheegay inuu arkay gawaadhi badan oo Jigjiga uga sii baxayay dhanka Qabri-bayax.
Nalooma sheegin inay masuuliyiin kale ku weheliyaan safarkan Cabdi Iley balse, waxaa magaalada Jigjiga diyaarad uga bixi doona dad 50 ruux ka badan maalinta bari ah oo tagi doona magaalada Godey.
Meelaha ay wafdigan Godey ka soo dagaya booqanayaan ayaa naloogu sheegay dagmada Boodha-Caano, Dhanaan, Qabridahare, Dhagaxbur iyo xarunka Kililka ee Jigjiga.
Qurba-Joog Jidwaq ah oo Addis Ababa Soo Gaadhay
Published on Friday, 31 May 2013 17:12	Xogta Shacabka (Addis Ababa) Qurba-joog ka socota beesha Jidwaaq ayaa lagu soo waramayaa inay soo gaadheen magaalada Addis Ababa si ay u xoojiyaan odayaal horay halkaasi ugu sugnaa oo dawlada dhexe uga dacwoonayey xukuumada Kililka 5aad. Sida ay sheegtay Radio Jigjiga, waxay qurba-joogtani ku yimaadeen kadib tashi ay beeshu yeelatay.
Dhanka kale, ayay Radio Jigjiga sheegtay in Addis Ababa ay u anba baxeen qaar kamid ah masuuliyiinta beesha Jidwaq uga jira xukuumada Kililka iyo aqoonyahano kale.
Halkan Ka Dhagayso Warkaa & Warar Kale oo Radio Jigjiga Tabisaay
Maareyihii Hore ee ESTV Barre oo Dagaanka Laga Qixiyay
Published on Thursday, 30 May 2013 16:09	Xogta Shacabka (Addis Ababa) Maareeyihii hore ee ESTV Bare Xasan ayaa naloo soo sheegay inuu dagaanka uga qaxay masuuliyiinta Enterprise-ka, kadib markii ay shaqadii ka eryeen isla mar ahaantana jeelka uu ku jiray laba bilood isagoon maxkamad la soo taagin. Bare ayaa kadib markii laga eryay ESTV shaqo laga siiyay Enterprise-ka isagoo maamulayay mashaariicda laga wado Shinniile.
Dad ay Bare asxaab yihiin ayaa Xogta Shacabka soo gaadhsiiyay in Barre, ay is fahmi waayeen Maareeyaha Enterpriseka Ibraahin Cali, oo goobtii shaqo ka soo badalay. Markaasi kadib ayuu Bare banaanka u saaray sir ku saabsan musuq Ibraahin ku jiro, oo ay kamid tahay beero dad ehelkiis ah leeyihiin oo bilaash riigaga dawlda ceelal loogu qoday iyo dhismayaal Ibraahin ka dhistay Diridhabe.
Ibraahin ayaa markaasi, cabasho gaadhsiiyay Booliska inuu ka shaqayn la’yahay Bare, sidaasi darteed loo xidho, kadibna ay saraakiisha boolisku jeelka u taxaabeen Bare, halkaasi oo ku xidhnaa mudo ka badan laba bilood. Ilo lagu kalsoonyahay ayaa noo sheegay in ay Boolisku aakhirkii damiin ku sii daayeen Bare kadib markii danbi lagu soo oogi waayay. Xadhiga Bare ayay Ibraahin ka caawiyeen saraakiil ka shaqaysa Enterprise-ka oo xidhiidh la leh qaar kamid ah danbi baadhayaasha Booliska.
Bare Xasan ayaa markii xabsiga laga soo daayayba ka baxay Jigjiga, isagoo sida naloo xaqiijiyay aysan cidina ogayn halka uu rasmi u daganyahay. Xogta Shacabka oo isku dayday inay ogaato halka uu ku danbeeyay ayaa naloogu sheegay inuu joogo Addis Ababa, halka dad ay iksu dhawyihiin noogu warameen inuu daganyahay magaalada Harar.
Hayadaha cadaalada ee Kililka 5aad ayaan inta badan is-hortaagi karin sharci darada ay ku talaabsadaan masuuliyiinta dawladu iyo kufsiga ay masuuliyada ku sameeyaan, taasi oo keenta in muwaadiniin badan xuquuqdooda lagu tunto.
Warar Qubane Ah oo Meelo Kala Duwan Naga Soo Gaadhay
Published on Wednesday, 29 May 2013 14:23	San Diego: Shirkii magaalada San Diego uga socday Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeeniya ee OYSU ayaa la soo gaba gabeeyay, iyadoo dib loogu doortay inuu Xoghaye Guud ka noqdo OYSU Mujaahid Sheekh Ibraahim Cabdallaa oo ah wiil uu dhalay Alla Ha U naxariistee Gudoomiyihii hore ee Jabhada ONLF.
Jigjiga: Ilo lagu kalsoonyahay oo Jigjiga nooga soo warama ayaa noo sheegay in Ku xigeenkii Enterpris-ka Biyaha C/raxman Curagte ee dhawaanta warbaahita DDS qaar soo tabiyeen in shaqada laga joojiyay, dib loogu fasaxay. Sida ay ila wareedyada an warkan ka helnay noogu warameen, Curaagte ayaan marka horeba loo qorin warqad magacaabis ah, ee isagu ku shaqo galay go’aankii golaha wasiirada. Wasiirka Madaxtooyada C/Casiis oo madax ka ah Boardiga maamula Enterprise-ka ayaa Curaagte u qoray warqadii magacaabista,sida ay noo xaqiijiyeen dad asxaabtiis ah.
Kismaayo: Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose, ayay saan saan colaadi ka taagantahay kadib markii Maamulka Juba Land uu xayiraad ka saaray masuuliyiinta Dawlada Federaalka Soomaaliya inay safar ku yimaadaan Kismaayo. Dhankooda Dawlada Federaalka ayaa ku hanjabay inay jawaab dag dag ah ka bixin doonaan wasiirada Dawlada ee lagu xidhay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo.
Dhoobaweyn: Dagmada Dhoobaweyn ee gobolka Qoraxay ayaa todobaadkan heshay adeega telefoonka Mobile-ka, sida ay noo xaqiijiyeen dad halkaasi ku sugan oo xidhiidh la soo sameeyay eheladood.
Jigjiga: Xog magaalada Jigjiga shalay naga soo gaadhay ayaa sheegaysa in todobaadka ay shirar albaabadu u xidhanyihiin xerada Garab-case uga socdeen saraakiisha Liyuu Booliska iyo Cabdi Iley, halkaasoo ay isku sameeyeen waxa loogu yeedho Gamgame. Inkastoo faah faahin buuxda aanaan ka helin, hadana waxaa la isla dhex marayaa in qaar saraakiisha kamid ah la xidhay, halka qaar kalena la dalacsiiyay.
Berbera: Maamulka Somaliland ayaa todobaadkii hore Berbera ku soo qabtay muwaadin u dhashay Kililka 5aad, kaasoo sida an meelo kala duwan ka ogaannay diyaarad ka soo raacay Gaalkacayo una socday wadanka Yemen. Muwaadinkaasi ayaa lagu magacaabaa C/raxmaan Xasan C/laahi ayaa loo malaynayaa in loo gudbiyay dawlada Ethiopia.
Masuuliyiinta DF Somaliya oo Laga Mamnuucay Garoonka Kismaayo
Published on Tuesday, 28 May 2013 18:52	Xogta Shacabka (Kismaayo) Madaxweynaha Maamul-Goboleedka Jubaland Axmad Madoobe, ayaa masuuliyiinta Dawlada Federaalka Soomaaliya ka mamnuucay imaanshaha magaalada Kismaayo. Sida lagu shaaciyay qoraal loo qaybiyay saraakiisha gagida diyaaradaha ee Kismaayo saaka, waxuu Axmad Madoobe amar ku bixiyay inaan cid ka socota Dawlada Federaalka oo Xamar ka timaada loo ogaalaanin gudaha Kismaayo.
Ujeedada xayiraadan ayaa lagu macneeyay inay dawlada Federaalka Soomaaliya maleegayso qorshayaal ay rabto inay ku kala qaybiso shacabka Jubaland. Tan iyo intii lagu dhawaaqay in Axmad Madoobe loo doortay Madaxweynaha Jubaland ayay masuuliyiinta Muqdisho ku sugani cadaysteen mawqifkooda inay ka soo hor jeedaan.
Dhanka kale, magaalada Kismaayo waxaa ku sugan Kornayl Bare Adan Shire (Bare-Hiiraale) oo sheegtay in loo doortay Madaxweynaha Jubaland. Sheegashada Bare Hiiraale ayaa lagu eedaynayaa inay ka danbayso Dawlada Federaalku, oo ku xumayneysa Axmad Madoobe.
Dagaamo badan oo ka tirsan Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo Khaatumo, iyo waliba qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada dibada ayaa taageero balaadhan u muujiyay Axmad Madoobe.
Jigjiga oo Habeenadan Bandaw Saaranyahey
Published on Sunday, 26 May 2013 21:34	Xogta Shacabka (Jigjiga) Amaanka magaalada Jigjiga ayaa aad loo adkeeyay iyadoo gabi ahaanba la joojiyay dhaq dhaqaaqii gawaadhida ee wakhtiga habeenkii. Gaadiidka dadweynaha ayaa iyaga casar dheer lagu amraa inay xaroodaan, waxayna booliska taraafikadu xidhaan wadooyinka dhex mara magaalada Jigjiga oo bandaw ku jirtay laga soo bilaabo habeen hore.
Arrintan ayaa naloo sheegay inay sabab u tahay iyadoo ay soo dhawdahay xuska Ginboot oo ah wakhtigii ay Jabhada EPRDF ee Ethiopia ka talisa xukunka qabsatay. Shir shalay subax loo qabtay masuuliyiinta Kililka ayuu M/weyne Ku xigeenka kililka C/llaahi Ethiopia ku sheegay in si amniga loo adkeeyo la joojin doono dhaq dhaqaaqa gaadiidka inta ka horaysa Talaadada.
Mid kamid ah akhristayaasha Xogta Shacabka oo email nooga soo diray Jigjiga ayaa noo sheegay in saacadaha hore ee fiidkii wadooyinka taaganyihiin Taraafiikada oo gawadhida ku amraya inay xaroodaan, wixii ka danbeeya 4 saac ama 10-ka fiidnimona gaadhigii wadada lagu arko lagu xaraynayo jeelka gobolka.
Xuska Ginboot ayay shacabka Jigjiga si gooni ah ugu xasuustaan qarixii dadka badani ku lee’deen ee lala beegsaday sannadkii 2007, inkastoo wakhtigaasi kadib wax amni darro ahi ka dhicin Jigjiga.
M/weynaha Kenya oo Ka Hadlay Arrimaha Kismaayo
Published on Sunday, 26 May 2013 12:31	Xogta Shacabka (Addis Ababa) Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka mid ahaa Madaxweynayaashii ka qeybgalay shir madaxeedkii IGAD ee Addis Aababa lagu qabtay ayaa khubad uu kulanka ka jeediyay ka sheegay in dowladdiisu ay dowladda Soomaaliya gacan ka siineyso sidii ay maamul iyada ugu magacaabi laheyd gobolada Jubbooyinka iyo gobolada kale ee dalka Soomaaliya ee ay dowladdu maamusho.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaa kale oo uu sheegay in ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo ay qeyb lixaad leh ka qaadan doonaan dib dejinta Soomaaliya, wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada Kenya ay qeyb ka yihiin kuwa AMISOM isla markaasna aysan ka boodi Karin go’aan kasta oo Midowga Afrika ka soo baxa, isagoo sheegay inay dhiig u hureen sidii ay Soomaaliya dowlad u heli laheyd sida uu yiri.
Madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay hadda ka jirto dowlad rasmi ah oo aan aheyn KMG, sidaas daraadeedna ay tahay in dalalka gobolka iyo kuwa IGAD ay dowladda Soomaaliya howlaha ay ka waddo gudaha dalka Soomaaliya ay ku taageeraan, isla markaasna dowladda Soomaaliya loo daayo maamul u sameynta gobolada dalka, wixii lagu taageeri karana loo fududeeyo, isagoo dalbaday in faragelinta laga joojiyo, wuxuuna sheegay in Kenya aysan faragelin ku heyn Soomaaliya.
“Waxaan la dhacsanahay howsha ay dowladda Soomaaliya ay ka waddo gudaha iyo dibadda dalka, kuwaas oo ay ugu adeegayso shacabka Soomaaliyeed, waxaana rajeynayaa in la arko Soomaaliya oo dib cagaheeda ugu istaagta” ayuu yiri Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo wax lagu farxo ku tilmaamay in Afrika sanadkan ay tahay sida hal dowlad oo kale, isagoo dhinaca kalena ku taliyey in la sii wada wada shaqeynta hadda Afrika ka dhexjirta iyo taageerada ay dhexdooda isku fidinayaan.
Madaxweynaha Kenya oo ka hadlay ciidamada Kenya ee ka mid ah AMISOM oo ku sugan Jubbada Hoose ayuu sheegay in howshoodu ay tahay sidii ay uga qayb-qaadan lahaayeen dib u soo celinta amniga Soomaaliya, wuxuuna yiri “Ciidamada Kenya waxay qeyb ka yihiin howgalka Midowga Afrika ee lagu xasilinayo Soomaaliya, doorkooduna waa inay ka caawiyaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen nabadooda, ee dadka yeysan si kale u arkin ciidamada Kenya ee Kismaayo jooga”.
Midawga Afrika oo 50-Guuradodii Xusaya
Published on Saturday, 25 May 2013 13:10	Xogta Shacabka (Addis Ababa) Xuska Sannad-Guuradii 50aad ee Ururka hada loogu yeedho AU, ayaa saaka ka bilaabatay xarunta wadanka Ethiopia ee Addis Ababa, oo ay goob joog ku yihiin hogaamiyaasha dhamaan dalalka Afrika iyo marti ka socota caalamaka intiisa kale.
Waxaa la aas’aasay 1963-dii markaaso magaciisu ahaa OAU, ayna wadama badanoo Afrikaan ahi halgan ugu jireen inay ka hoos baxaan isticmaarkii ree Yurub ee qaarada Afrika qaybsaday. Sanadkii 2002 ayaa magaca Midawga Africa loo badalay AU (African Union).
Midawga Afrika ayaa xooga saaraya horumarka dhaqaale ee ay qaaradu ku talaabsan karto Nus-Qarniga fooda inagu soo haya, sida lagu qeexay qoraal loogu magac daray “Vission 2063” oo lagu qaybiyay goobta uu ka socdo xuska.
Wadamo dhawr ah ayaa dhaqaalahoodu koray, balse inta badan dalalka Afrika ayaa kamid ah kuwa caalamka ugu faqiirsan, uguna musuqa badan.
Page 18 of 29	StartPrev13141516171819202122NextEnd	Videos